Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. #राशिफल – Page 101 – Janata Live
बेलामा बुढानिलकण्ठको दर्शन गरि भेटी स्वरुप सेयर गर्दै आफ्नो राशिफल हेर्नुहोला । तपाईहरूको दिन शुभ रहोस् ।। #ॐ:
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ)आय आम्दानी बढ्ने तथा व्यवसायको उन्नति हुनपर्ने हो तर ग्रहको बाधा देखिएको छ । भगवान् श्रीहनुमानदेवको स्तुति अर्थकर हुनेछ । खर्च बढ्ने र अभीष्ट कार्यमा अलि बढी संघर्षको अनुभूति हुनेछ । तथापि आकस्मिक उपलब्धि पनि हुनेछ । काम सफल भएतापनि विपक्षीको विरोधको सामना गर्नुपर्नेछ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो)अड्चनको बाबजुद पनि उद्यमक्षेत्रको उन्नति–प्रगति हुनेछ । उच्च सम्पर्कले मनोबल बढ्ने एवं हैसियत र जिम्मेवारी मिल्नेछ । अड्चनको निवारणको लागि हनुमानदेवको स्तुति उपयुक्त हुनेछ । केही संघर्ष बढ्ने गोचर देखिएको छ । खर्चका बहाना बढ्नेछन् तथापि अनपेक्षित...
यो हप्ता तपाईंको दिन कस्तो रहला ? माता पाथिभरालाई एक सेयर गर्दै भेटी चढाएर साप्ताहिक राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईंको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।#ॐ:
मेष : वरिष्ठ व्यक्तिबाट सहयोग मिल्नेछ । भ्रमण तथा फेशनमा अधिक खर्च हुनेछ । भौतिक सुविधाका वस्तु खरिद गरिनेछ । परिवारमा शान्ती छाउनेछ । साथी या नजिकको नातेदारसंग मतभेद सिर्जना हुनेछन् । कमी भएको आत्मबलमा वृद्धि भइ साताको अन्त्यमा काममा सफलता मिल्नेछ । स्वास्थ्यप्रति सचेत रहनु आवश्यक छ । वृष : धैर्य रहन सकेमा विस्तारै समय आफ्नो पक्षमा हुनेछ । कडा मिहिनेतका कारण थकान महसुस हुनेछ । काममा योजना अनुसार सफलता मिल्दै जानेछ । सन्तान सम्बन्धि समस्याले चिन्ता बढाउनेछ । साथीहरुबाट आर्थिक कारोबारमा धोका हुनेछ । जीवनसाथीको साथ र सहयोगले मन प्रसन्न रहनेछ । मिथुन : व्यवसायिक यात्राको सम्भावना रहेको...
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : वि.सं. २०७६ असार ९ गते । सोमबार । इ.स. २०१९ जुन २४ ।
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ)मेहनत गर्दा अवसर भने पाइनेछ । स्वास्थ्यमा मन्दता आउन सक्ने तथा दीर्घरोगीलाई बढी कष्ट हुन सक्ने सम्भावना छ । तथापि गुरु कृपा मिल्ने र केही काम बन्नेछ । बुधबारबाट परिस्थितिमा सुधार आउने र क्रमशः सफलता मिल्न थाल्नेछ । महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजनाबारे विचार विमर्श हुने, विशिष्ट व्यक्तित्त्व एवं निकायसँग सम्पर्क स्थापित हुने, व्यावसायिक उन्नति र अर्थ लाभ हुनेछ । सामान्य भए पनि ठूलो खाँचो टर्नेछ । खर्च भए पनि विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो)नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने मौका छ । महत्वपूर्ण काम गरेर दाम,...
बुद्ध भगवानलाई दर्शन स्वरुप एक सेयर गर्दै तपाईंको भाग्य र भविष्य हेर्नुहोस्
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ)राजनीति तथा समाज सेवामा गरिएका लगानीबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । सांगीतिक माहोलमा दिन बित्ने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेछ । निति निर्माण तहमा तपाईंको सहभागिताले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछ । व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ भने पढाइ लेखाइमा भनेजस्तो सफलता हुने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा पदोन्नतीको गतिलो योग रहेकोछ । वृष (इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो)भाग्यले साथ दिनेहुँदा सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ । धर्म तथा अध्यात्मतिर ध्यान जाने हुनाले शरिरले सकारात्मक उर्जा...
आज शुक्रबार आउनुहोस् माता पाथिभराको दर्शन गरि भेटी स्वरुप सेयर गर्दै आफ्नो राशिफल हेर्नुहोला । तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्।
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ)रोकिएर रहेको कार्य पूरा गर्न सकिने छ । लामो यात्राको अभिक सम्भावना रहेको छ भने विदेशी वस्तुको व्यापार व्यावसायबाट भनेजस्तो आम्दानि गर्न सकिनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आई उपचार खर्च बढ्न सक्छ ध्यान लिनुहोला । पढाई लेखाईमा सफलता प्राप्त गर्न अलि बढिनै समय लगानि गर्नुपर्नेछ । आफन्त तथा अग्र्रज ब्याक्तित्वहरुसँग सैद्धान्तिक विषयमा राय बाजिनेछ भने घर परिवार तथा आफन्तहरुबाट भनेजस्तो सहयोग नपाईने हुँदा दिगो काम गर्ने अवसर गुम्नेछ । बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वा)सुरुमा खर्च बढ्ने, अनर्थ अपजस खेप्न पर्न सक्नेछ । काम गर्ने सवालमा होसियार रहनुहोला काम बिगार्ने तथा तपाईको नकारात्मक सोच्नेहरु सक्रिय हुनेछन् । आम्दानि हुँने ठाउँमा सत्रुका आँखा लाग्न सक्छ...
श्रीकेदारनाथ मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईंको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।#ॐ: #श्रीकेदारनाथ_मन्दिर
मेषःशत्रु परास्त गर्न सकिने, रोकिएर रहेकाकार्य पूर्ण हुनेछन्, श्रीलक्ष्मी वृद्धि हुने, यात्रा उन्नतिप्रद रहनेछ । व्यापारिक यात्रा हुन सक्ने, दाम्पत्य सुख मिल्ने र प्रेमाभिलाषिहरूको लागि प्रेम प्रस्तावको सम्भावना पनि देखिएको छ । शनिबारपछि भने स्वास्थ्य एवं काम बिग्रन सक्नेछ । वृषःपारिवारिक समस्या बढ्न सक्ने, असमझदारी सम्भावना र अपयशको स्थिति रहनेछ । घमन्ड नगरे विद्याबुद्धि बढ्ने, लेखन तथा अध्ययनमा सफलता मिल्नेछ, अर्काको चियो चर्चो गर्दा स्वकार्य अधुरो रहन सक्ने सम्भावना छ । आइतबारपछि आरोग्य लाभ, कान्ति एवं श्रीवृद्धि, शत्रुमाथि विजयको योग छ । प्रेम तथा दाम्पत्यसम्बन्ध सुदृढ हुनेछ । मिथुनःशारीरिक स्फुर्ति, कार्यरुचि, सहयोग, व्यावसायिक उन्नति र यात्राको सम्भावाना छ । केही...
कालिञ्चोक भगवतीको दर्शन गरि राशिफल हेर्नुहोला, भेटी स्वरुप एक सेयर गरौं । तपाईंको मनोकामना पुरा हुने छ । #ॐ:
मेष (चु,चे,चो,ला,ली,लु,ले,लो,अ)सुरुमा आर्थिक उन्माद बढ्न सक्ने सम्भावना छ । विद्वान्जनको सल्लाह लिनु उपयुक्त हुनेछ । कष्टकर यात्राको सम्भावना बलियो रहेको छ । अनावश्यक झन्झटको सामना गर्नुपर्नेछ । बोलीकै कारण आफन्तजनसँग विवाद होला । पढाइमा मन जाने छैन् । कुटुम्बिक सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सकिनेछ । उद्यमव्यवसाय एवं पेसागत कामकार्यमा राम्रो पौरख गर्न सकिनेछ । शुक्र मध्याह्नपछि आइतबार मध्याह्नसम्म जनव्यवहारमा सावधानी अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ अन्यथा वादविवादको झमेला नपर्ला भन्न सकिन्न । वृष (इ,उ,ए,ओ,वा,वि,वु,वे,वो)धार्मिक क्षेत्रको यात्रा आजका दिनमा सफल देखिन्छ । आफ्ना लागि भन्दा अरुका काम व्यबहारमा समय खर्च गर्नुपर्नेछ । केहि अपजसको सामना गर्नुपर्ला । सुरुमा बढी चाहना गरेको काममा भने केही...
श्री पशुपतिनाथको दर्शन गरि राशिफल हेर्नुहोला, भेटी स्वरुप एक सेयर गरौं ! #ॐ: #श्रीपशुपतिनाथ
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ)धर्म,सस्कृति तथा आफ्नो रितिरिवाजको जगेर्ना गर्ने काममा समय खर्चनु पर्नेछ । पढाइ लेखाइमा फड्को मार्दै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । सामाजिक काम गरि पुरस्कृत हुने योग रहेकोछ । साथिभाई तथा आफन्तहरुको सहयोग पाइने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ भने नयाँ काम गरि आम्दानीका स्रोतहरु फराकिला पार्न सकिनेछ । समयले साथ दिने हुनाले मन प्रशन्न रहने तथा भाग्य बृद्धि हुनेछ । बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो)सानातिना घरेलु समस्याहरुले साताउनेछ भने सानो काम सम्पादन गर्न पनि दिनभर समय लाग्नेछ । समयले साथ नदिँदा हुनै लागेको कामहरु बिग्रने तथा अरुकै पोल्टोमा जानेछन् । माया प्रेममा मनमुटाब सिर्जना हुने तथा जीवन साथिको असहयोगले महत्वपुर्ण उपलब्धि गुम्न...
बुद्ध भगवानको फोटोलाई दर्शन गरि राशिफल हेर्नुहोला, भेटी स्वरुप एक सेयर गरौं ।
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ)व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुँनाले आर्थिक रुपमा एक कदम अगाडि बढ्न सकिनेछ । छोटो दुरिको उपलब्धिमुलक यात्राको तय गर्न सकिनेछ । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा मन जाने हुँनाले परिणाममुखि नतिजा ल्याउँन सकिनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउँने छन् बिवादित विषयहरु समाधान भएर जानेछन् । माया प्रेममा रमाउँने चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ । बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो)खानपानमा ध्यान नदिँदा स्वास्थ्यमा समस्या आउँनेछ । माया प्रेममा धोका हुनेछ भने पति पत्निबीच बिश्वासको बाताबरण गुम्ने खतरा रहेको छ । पढाई लेखाईमा खासै ध्यान नजाँदा बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा अरुभन्दा पछि परिनेछ । कुटुम्बसँग मनमुटाब बढ्ने हुँदा आजको दिन टाढानै रहनु राम्रो रहेको छ...